Isiko elinePhepha eliSongelayo elingenakulukwa elinokuLungisa iiNgubo zeNgubo eziMnyama zePolypropylene
Izinto zeNkulumbuso: Ezi ngxowa zengubo zenziwe kukhuselo lokusingqongileyo Ilaphu elingalukwanga elinokumelana nokuqhekeka, ukumelana namanzi, ukuthamba kunye nokuphefumla. Yakhelwe ukuhlala ixesha elide kwaye ithembisa ukukhusela iimpahla zakho ngalo lonke ixesha.
Zikhusele ngothuli: Ezi ngxowa zengubo ziyaphefumla kodwa gcina iimpahla ezinje ngeebhatyi zoboya kunye neebhatyi zesikhumba zikhuselwe kwaye zigcinwa. Thintela ukungcola okuqhelekileyo njengothuli, iinwele zasekhaya, ukubonakaliswa kokukhanya, ukufuma, ukufuma okanye ukungunda kwimpahla eyonakalisayo.
I-Zipper eyenziwe ngokwezifiso i-6inch 8inch engeyiyo ephothiweyo yokugcina i-Tote Bag i-Orange engeyiyo
1. Chaza iingxowa zakho zokufudumeza ngokweemfuno zakho;
2. Sikunika i-Know-How, ukuze ukwazi ukuthatha isigqibo, sahluke kangangokuba wonke umntu uya kufuna ukuba nayo;
-Khetha izinto kunye nombala. -Khetha uyilo / ubungakanani. -Khetha i-LOGO yakho / ifoto oyithandayo.
Izinto eziphathekayo: -I-polypropylene ephothiweyo, i-PP ephothiweyo, iPolyester;
4. Uhlobo: Ukuphathwa kabini;
Zipper Pink Blue Nonwoven Thermal Bag Khupha Ukutya kwaselwandle Ikhekhe Ingxowa engalukwanga yokugquma Ingxowa yokutya
Izinto eziphathekayo: uboya obungalukanga kunye neeperile
2.Size: ubungakanani esingabizi;
3. Umbala: Mhlophe, Mnyama okanye ugcizelele ngokwesicelo sakho;
4.Logo: logo elicwangcisiweyo
5.Uprinta: ushicilelo lwesilika lwe-silk, i-foil bronzing kunye nokuprinta ubushushu, Ukuprinta kwe-Thermal sublimation, ukuPrinta kwidijithali, njl.
I-Bolsa de Alimentos Zipper White Isidlo sasemini epholileyo Iibhegi zokuSonga iiPikniki ezinokuThengiswa ngokutya okuThengiswayo
Umgangatho ophezulu uza ku-1; inkxaso iphambili; Intsebenziswano kwishishini ”yifilosofi yethu yeshishini elincinci elijongwa rhoqo kwaye lilandelwe ngumbutho wethu weFashoni eNtsha yeLogo eChina eyenziwe ngeLogo eQinisekisiweyo yeTyhuthi yasemini, sikholelwa ukuba oku kuyasibeka kukhuphiswano kwaye kwenza abathengi bakhethe kwaye basithembe. Sonke sinqwenela ukwenza amadili okuphumelela kunye nabathengi bethu, ke sinike umnxeba namhlanje kwaye wenze umhlobo omtsha!
Iimveliso eziTshisayo eziTshisayo China Sublimation Blank Non-Woven Shopping Bag
Intengiso yeNtombi eNyulu yeNwele yokuTsala iSilika i-Wig Packaging Bag Satin
Umbala: Indalo, uphondo lwendlovu, mhlophe, mhlophe, mnyama, luhlaza, bomvu, tyheli, luhlaza, purle njl.
Ubukhulu: 5 × 7 cm 7 × 9 cm 9 × 12 cm 10 × 15 cm 13 × 18 cm 15 × 20 cm 20 × 20 cm 20 × 25 cm 25 × 30 cm 30 × 40 cm 40 × 50 cm 50 × 60 cm 50 × 70 cm 60 × 60 cm njl (Nawuphi na ubungakanani ungenziwa ngemfuneko)
Logo: yoshicilelo screen ukuhlolwa, emboss, bexhentsa eshushu, nezimfakamfele, ileyibhile ephothiweyo, ileyibhile iphepha njl
Ukusetyenziswa: Ukupakisha kwesipho, ukuhombisa ubucwebe, ibhotile, incwadi, ukuhonjiswa kweKrisimesi njl.